Tranga tany Ampanihy :: Lehibena zandary voalaza fa nanapoapoaka basy teo an-tanàna • AoRaha
Tranga tany Ampanihy Lehibena zandary voalaza fa nanapoapoaka basy teo an-tanàna
Nanakoako tao an-tampon-tanànan’Ampanihy ny feom-basy, tamin’ny alin’ny talata lasa teo. Voalaza fa lehibena zandary iray, any an-toerana, no nanapoaka basy.
Nifanontany ny zava-nisy ny mponina, toy ny olona mety ho naratra na maty voatifitra. «Nitifitra ny zanako io zandary io. Nieren-doza izy. Tsy nahavoa azy ny bala tamin’ny tifitra intelo niseho. Hita teo amin’ny toerana nitrangan’ny fanapoahana basy ny tranom-bala avy tamin’izany», araka ny fitantaran’ny rain’ilay olona voalaza fa niharan’ny hetraketraka nataon’ity mpitandro filaminana ity tao amin’ny kaonty « Facebook ».
Nambaran’ny loharanom-baovao hatrany fa sady mamo ilay zandary, teo am-panaovana ireo fihetsika nampihorohoro ireo. Nanao antso sy fitarainana tamin’ny tompon’andraikitra nanoloana io tranga io ireo lasibatra.
Fantatra fa mpifanila vodirindrina ao amina fokontany iray ihany ity lehibena zandary voatonotonona sy ilay olona nilaza fa nanapoahana basy. Tsy mbola fantatra mazava ny zava-niseho nahatonga ny fampiasana fitaovam-piadiana. Nanontaniana an-telefaonina momba ny tatitra voarainy sy ny fahenoany ny zava-nitranga ny lehiben’ny zandary any Toliara, izay lehiben’io zandary voatondro ho nanao herisetra io.
«Ny henoko dia toy ny hoe nisy fifamaliana teo amin’ilay zandary sy io olona io. Nisy tokoa ny fanapoahana basy saingy tsy mbola fantatra mazava ny fisehon’izany na mety ho tifi-danitra. Nalefa nidina any an-toerana avy hatrany ny lehiben’ny vondro-tobim-paritry ny zandarimaria Atsimo Andrefana hanao ny fanadihadiana momba io tranga io. Andrasana ny tatitra avy aminy», hoy ny lehiben’ny zandary, any Toliara.
Namaly ny fitarainana nataon’ilay lasibatra tamin’ny alalan’ny kaonty « Facebook »-ny ny sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena (Seg), ny jeneraly Ravalomanana Richard. Nambarany fa: «voaray ny fitarainana. Hoampitaina sy handraisana fepetra henjana amin’ity raharaha ity. Tsy azo ekena ny zavatra toy izao. Tsy misy firaisana tsikombakomba amin’ny ratsy ny ato amin’ny zandarimaria». Notsindriany mafy ihany koa ary nanao fanentanana tao amin’io fanazavana io ny Seg ny amin’ny fahasahiana miteny ny tsy mety ataon’ny zandary fa vonona handray andraikitra ny tompon’andraikitra.
Fandrobana :: Mpivady miara-mangalatra eny amin’ny fiantsonan’ny taksiborosy
Fahitana faty :: Razana roa nitsingevana teny amin’ny reniranon’Ikopa